Madaxweynihii hore ee Yemen oo la sheegayo in uu dalka ka baxay – Radio Muqdisho
Madaxweynihii hore ee Yemen oo la sheegayo in uu dalka ka baxay
Warar laga helayo ilo kala duwan oo ku dhow dhow dowladaha Yemen iyo Sacuudiga ayaa sheegaya in madaxweynihii hore ee Yemen Cali Cabdalla Saalax uu isaga baxay dalka Arbacadii.
Waxaa la filayaa in bixitaanka Cali Cabdalla Saalax si rasmi ah loogu dhawaaqo, sida uu qoray bogga wararka Yemen24.
Cali Cabdalla Saalax waxa uu hadallo hore oo uu jeediyay ku sheegay in uu doonayo in uu safar caafimaad ugu bixi doono dalka Mareykanka.
Saalix waxa uu ka codsaday Yamaniyiinta in ay iska cafiyaan, wixii gaabis ah oo dhankiisa ka dhacay muddadii Soddonka sano ka badneyd ee uu ka talinayay dalka Yemen.
Lama xaqiijin in dowladda Mareykanku dal ku gal siisay Saalax iyo in kale, laakiin waxaa lagu soo warramayaa in uu kulan la qaatay xubnaha qoyskiisa oo dhan, uuna la dardaarmay, taas oo dad badani u qaateen in uu safarkiisu dheeraan doono.
Cali Cabdalla Saalix, waxa uu dalka Yemen ka talinayay 33 sano, waxaana talada dalkaas looga tuuray kacdoon shacab, ka dibna waxaa la siiyay xasaanad ah in aan waxba loo raacan karin, hase yeeshee Saalix, waxa uu isbahaysi la galay kooxda Xuutiyiinta ee shiicada ah, kuwaas oo la wareegay inta badan magaalooyinka dalka Yemen oo ay ku jirto magaalada caasimadda ah ee Sanca.
Isballaarinta Xuutiyiinta iyo ciidammada daacadda u ah Cali Cabdalla Saalax ayaa keenay in Isbahaysi Sacuudigu hoggaaminayo ay dagaal ku qaadaan Xuutiyiinta, oo duullaan ku soo qaaday magaalada koofurta ku taalla ee Cadan, halkaas oo ay ku khasbeen madaxweynaha la doortay Cabdu Rabu Mansuur Haadi in uu u cararo Sacuudiga.
Kulan Lagu Taageerayay Ololaha La Dagaalanka Qaadka Oo Muqdisho Lagu Qabtay